Madagasikara: Varojanaka ho vadin’olona, trangam-pahantrana lalina · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 20 Novambra 2008 20:17 GMT
Amin'ny maha olompirenena Malagasy mpampita vaovao ahy dia ezahiko mandrakariva ny manambara ny fandrosoana eo amin'ny lafim-piaraha-monina sy toe-karena vitan'i Madagasikara. ny anton'izany ezaka izany moa dia noho ny finoana ao amiko fa tsy mivoitra ho hitan'ny besinimaro tsara ny ezaka ataon'ny tsirairay ho fampivoarana ny tontolony.
Sarotra ihany anefa matetika ny mijery lafitsaran-javatra manoloana ny fahasarotam-piainana mitambesatra. Tsy afa-nidify ny adihevitra momba ny fahantrana lalina manjo ny ankamaroan'ny Malagasy ny mpamaham-bolongana malagasy tamin'iny herinandro lasa iny. Indreto ohatra vitsivitsy ampitonantonanan-dRafahantrana an-dRaolombelona amin'ny fanapahan-keviny any anivon'ny fiarahamonina any.
Patricia, Mpamaham-bolongan'ny Foko izay afaka snitondra hafatra nandritra ny andron'ny fifampiankinana tany Bruxelles, no nitatitra ny nivarotan'ny ray aman-dreniny ny zazavavy iray (fr)
Ho an'ny sasany moa dia mifanaraka amin'ny ray aman-dreniny sy ny zanany vavy ny olona iray hividy an-drazazavavy amin'ny alalan'ny fanomezana na ny vola ho takalony. Tsara ny manamarika fa tsy voatery ho vahiny ilay mpividy fa amin'ny ankapobeny ihany izany tranga izany. Ho an'ny sasany indray moa dia endrika baiko no isehoany, mibaiko ny ray aman-dreny ary mankatò kosa ny zanany vavy! Ny tranga farany izay nivoaka an-gazety moa dia mikasika zazavavy iray 15 taona izay namidy 200 000 ariary(tokotokony ho $107 USD eo ho eo). Nanome toky moa izy fa haka vady azy saingy rehefa niara-nandany ny alina iray ry zareo ka nahafa-boninahitra an-dRazazavavy dia nampodiany tany amin-drainy iny avy eo. Tranga iray amin'ny mpiseho eto amin'ny nosy ihany izany tantara izany.
Nanamarina i News2dago fa niakatra ho avo dia avo ny tahan'ny nofinofyhanambady vazaha(mg):
Tonga eto Madagasikara ireo mpanera vazaha ka nampiantso ireo malagasy te hanambady vazaha. Gaga fotsiny aho nahita ity tatitra an-gazety fa mahery ny 4.000 izy ireo no milingilingy te hanambady vazaha. Ary voalaza fa arahan-dranomaso mihitsy oe ireo izay tsy lany. Indrisy tokoa fa dia hitomaniana ankehitriny ny hanambady vazaha.
Maro moa no naneho ny heviny tamin'ity lahatsoratra iray ity. Nomarihin'i Tritriva fa tsy ny ehiavy ihany nomitady hanambady vazaha. Sylvie indray miteny fa tsy ratsy tsy akory ny manambady vazaha aoka fotsiny hatoky tsara fa tsy nananjanaka ilay vazaha tamin'ny fanambadiany teo aloha fa tsy hanaja anao velively ireo ary hitongilana amin'ny zanany hatrany ny vadinareo. Mandresy lahatra kosa i Maintikely mba tsy hitsara befahatany fa hanaja ny safidin'ny vehivavy. Nampitandremany moa fa tsy voatery ho tsara araka ny iheverana azy tsy akory ny fiainana ampitan-dranomasina.
Lomelle, Mpamaham-bolongana ay amin'ny foko-Mahajanga, koa no nanatri-maso endri-pahantrana hafa. Hoy izy (fr):
Nisy niantso moa izahay mba hanao fanadihadiana eny Andralanitra. Nankany tsy nahalala izay miandry anay ary izaho sy i Rondro. Ny hany fantatra dia hoe mikasika ny fako no hatao eny [..] Nisy fiarabe nitondra fako nirimorimo teo alohanay rehefa nanakaiky ny toerana izahay. Rehefa tonga teny an-toerana io dia nanary ny fako nentiny ary tsitapitapitr'izay indreny olona tokony hotelopolo teo ho eo nifandrobaka ho eny amin'ny fako. Naloiloy, izay no teny tokana azo amaritana ny tsapako tamin'io fotoana io. Nankaloiloy ahy ireo olona tsy manana afa-tsy fako mba hivelomana. Nankaloiloy ahy ihany koa fihetsika rikoriko nasehoko tamin'io fotoana io. Mba nihevitra ny tenako ho sipa manana fivelarantsaina,tsy tia mitsaratsara olona sy tsy manameloka be fahatany ihany manko aho. Nefa tamin'io fotoana io dia tokana ihany ny tanjoko nanoloana izao endri-pahantrana izao, mihataka lavitra mandositra ireto olona ireto.
Nanana fomba fijery hafa momba ny fahantrana kosa i Micramia. Nohazavainy ary fa tsy aretina tsy azo sitranina tsy akory ny fahantrana(fr):
Tsy mahantra ianao raha mbola afaka mihinana ara-dalàna ihany isan'andro. Nefa azo sitranina ny fahantrana. Araka ny hevitro dia vokatry ny tsy faharanitan-tsaina loatra no mahatonga ny fahantrana. Izay tsy mampiasa nylohany ihany no tsy lasa lavitra. Ny toe-tsaina nomahantra ka rehefa tsy misy na inona na inona moa ao, amin'ny fomba ahoana no hahazoam-bola hividianana izay hohanina? [..] ny vahaolana dia ny mikolokolo ny sainy, manitatra ny fahalalany.